Caliqeyr M. Nuur
Maqaalkani wuxuu tixraacayaa talooyin badan oo laga bixiyey difaaca badda Soomaaliya. Misana fikradahaas ayaan ku weeleynayaa sal iila eg danta qarankeenna.
Bishii 8aad ee 2009ka waa tii uu baarlamaanka Soomaaliya laalay heshiiskii loogu magac-daray ”Is Afgarad” ee muranka lagu geliyey badda Soomaaliya. Haddana bishii 10aad ee 2011 ayuu baarlamaanku laalay qorshihii ‘Dhulbadeedka Soomaaliya’ loogu rogayey ‘Aag Dhaqaale’ oo isagu kii hore ka halis badnaa. Maantana (14 Ok. 2011) waxay shabakadda Somalitalk soo bandhigtay qormo caddeynaysa in ay Kenya weli shidaal ka baaranayso dhulbadeedka Soomaaliya. Qofka aanan arrinkan la soconi ha eego qormooyinka difaaca badda ee ku dhigan www.somalitalk.com
Labada shirqool ee sare haddii laga badbaaday miyaad maleyn kartaa dhagarta xigta iyo inta ay halisteedu la eg tahay? Waxa la hubaahi waa afar arrimood oo kala ah.-
i) Dalalkii baddeenna dhagrayey waxaa weli u muuqda kala daadsanaanta qaranka Soomaaliya.
ii) Haddii ay Kenya shidaal ka soo saarto badda Soomaaliya, waxaa ceelkaas u ilaalin doona dowlad reer-galbeed ah oo aanay Soomaaliya la taag ahayn. Arrinkuna wuxuu ku dambaynayaa dood aan dhammaad lahayn.
iii) Badda sun baa lagu qubayaa waxaana laga guranayaa kalluun sharci darro ah.
iv) Innagu ma lihin ciidan-badeed horjoogsan kara kuwa boobaya oo haddana sumaynaya khayraadka baddeenna.
Haddaba maxaa dan ah?
Admiral Faarax-qare oo ka hadlayey barnaamijka ’Falaqaynta Dhacdooyinka’ ee Somali Chanel ayaa tusaale u soo qaatay dalka Siishelis oo ilaalada baddiisa u xilsaartay Hindiya. Markaas buu ku talinayaa in aan innaguna u baahannahay quwad aan biyaha u xilsaaranno taniyo inta laga helayo ciidan Soomaaliyeed oo xooggan.
Waa lagama maarmaan awood diyaarsan oo loo xilsaaro badda ilaa laga helayo ciidan-badeed Soomaaliyeed oo xilkaas gudan kara. Dalka ugu sokeeya ee xilkaas gudan karaana waa Turkiga; saddex sabab awgood.
1. Waa dal ka tirsan gaashaan-buurta NATO. Sidaas awgeed wuxuu galgal xooggan u leeyahay la macaamilka dalalka isbahaysigaas ee xad-gudubka joogtada ah ku haya baddeenna.
2. Waa dal leh ciidan-badeed xooggan oo u babac-dhigi kara awoodaha wax xumaynaya ee shisheeye iyo burcad-badeedba leh.
3. Waa dal xiriir wanaagsan la leh dadka & dowladda Soomaaliya.
Maxaa laga dheefayaa ilaalada Turkiga?
Danaha badan ee halkan noogu jira waxaa iila weyn afar qodob oo aan u kala hormariyey hadba sida ay u kala mudan yihiin. Waxay kala yihiin.-
1. In ay horjoogsadaan kuwa badda sumaynaya, kuwa kalluunka xadaya iyo weliba shirkadaha sida sharci-darrada ah shidaalka uga baaraya dhulbadeedka Soomaaliya.
2. In ay baaraan tanka sunta lagu shubay badda, kana tala-bixiyaan sidii looga saari lahaa.
3. In ay tababbaraan ciidan-badeedka Soomaaliya, si ay xilkaas ula wareegaan maalinta la gaaro waqtigii uu heshiisku ku ekaa.
4. In ay bixiyaan tababbarro la xiriira badmaaxnimada, kalluumaysiga iyo warshadeynta cunta-badeedka.
Turkigu maxay ka dheefayaan heshiishkan?`
Turkigu ma aha dal ku jira loollan dagaal oo dan weyn kama laha istiraatijiyada labada badood ee Soomaaliya (B. Cas & B. Hindiya). Sidaas awgeed haddii loo oggolaado in uu ka kalluumaysto baddeenna inta lagu jiro xilliga ballan-galka, markaas wax weyn buu ka dheefayaa. Aan ku celiyo ee faa’idada Turkiga ugu jirta ilaalinta baddu waa in loo oggolaado kalluumaysi sharci ah.
Yaanan lagu kadsoomin?
· Maanta waxaa baddeenna ka kalluumaysta dalal kor u dhaafaya 50 oo sida uu Admiral Faarax sheegay aanay jirin dan ay noo hayaan. Si taas ka duwan kalluumaysiga hal dal oo weliba hadimooyinkii kale kaa ilaalinaya ayaa roon, ee yaanan lagu kadsoomin in roonaantaas weyn looga bakheylo kalluumaysi yar oo tankiisa la og yahay.
· Maanta dalalkii Carabta waxaa ka oogan kacdoon dadweyne oo laga yaabo in uu ku dambeeyo meel ka xun qaran-jabkii Soomaaliya. Sidaas awgeed yaanan lagu kadsoomin heshiis bad-ilaalin ah oo lala galo dal Carbeed. Sidoo kale yaanan lagu kadsoomin ballan noocan ah oo lala galo dalalka kale ee Yurub, sababta oo ah heshiiskaasi wuxuu u jidaynayaa xadgudubyadii aan hore u tirsanaynay. Haddii aanu Turkigu xilkan qaadi karin waxaa lagu doorsan karaa Indoniisiya oo iyadu leh siyaasad xasilan, adeeg daacadnimo iyo ciidan-badeed xooggan.
· Maanta dowladda Soomaaliya waxay ka talisaa caasimadda barkeed. Dalka intiisa kale waxaa haysta maamul-gobaleedyo iskugu jira kuwa sheegta dal madax bannaan iyo kuwa dowladda xiriirka u jaraya haddii ay dantooda ka waayaan, ururro diimeed iyo weliba beelo hubaysan. Waxaana laga yaabaa in ay dowladdani burburto oo loo laabto xilligii kooxaysiga. Sidaas awgeed yaanan lagu kadsoomin fikirka ah dowlad baa curatay oo dhowaan hanan doonta ilaalinta badda.
· Maanta Soomaalidu ma laha waaya-aragnimo ay uga hortagto saliidowga biyaha. Cismaan Abshir Cigaal (Daawo Youtube ) ayaa ku taliyey in aanan lagu degdegin shidaal badda laga qodo maadaama uu berrigiiba shidaal ku jiro. Halista ka dhalan karta ayuu misana tusaale u soo qaadanayaa aafadii ka dhacday Gacanka Meksiko; halkan ka eeg .
Haddaba innaga oo berrigiiba shidaal ka heli karna yaanan lagu kadsoomin in aan u bareerno halista shidaal-badeedka oo haddii uu faruurmo ay sumoobayaan kheyraadkii badda iyo hawada dalku. Aan saliidda berriga qodanno, tan baddana aan dhaxal ugu reebno jiilasha dambe oo iyagu awoodi doona maareynta aafooyinka saliid-badeedda.
· Maanta waxa aanan weli quusan kuwii dhagarta u maleegayey badda Soomaaliya. Kuwani waa dowlado dhisan iyo gardarro garab og oo weliba haddii uu qorshe ka fashilmo haddana la imanaya qorshe kii hore ka dhib badan. Sidaas awgeed yaanan lagu kadsoomin awoodda uu baarlamaankeenna sharfani ku diidi karo wax kasta ee arrinkaas la xiriira. Waxaa lagu dhici karaa dabin aanay jirin tab looga baxo.
Haddaba dowladda waxaan ku oranayaa “Turkiga u xilsaar badda Soomaaliya” si aan Alle ka sokow uga gabbaadsannno dhagarta tan aan u jeedno iyo tan kale ee weli naga dahsoon.
Allaa mahad leh oo dalka iyo dadkaba ka badbaadiyey wixii dhagar lala maagganaa, waxa soo socdana awooddiisa ayaan uga magan nahay. Tan Eebbe ka sokow, waxaan u mahadnaqayaa qof kasta ee kaalin ka galay difaaca badda Soomaaliyeed. Aan si gaar ah u xuso hawlwadeenka Somalitalk, Baarlamaanka Soomaaliya, Bashiir Sheekh Maxamuud, Admiral Faarax C. Axmed (Faarax-qare), Cismaan Abshir Cigaal iyo boqolaalka aqoon-yahan ee difaaca badda u isu xilqaamay.
ARAGTIDA DADWEYNAHA: Jawaabtaada toos ugu qor halkan
Faafin: SomaliTalk.com | October 14, 2011